နှစ်သစ်မှာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးရဲ့အရှေ့ ဆုံးကနေ
အံ့မခမ်းဘွယ်သောရဲစွမ်းသတ္တိတို့ ဖြင့် CDM မှာပါဝင်၍
စစ်အာဏာရူးများကို ရဲရဲတောက်အံ့တု၍ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြရင်း ကျဆုံးခဲ့ကြရသော
သူရဲကောင်းများအားလုံးနဲ့အကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာ မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသော
သူရဲကောင်းများအားလုံး ၊ အံ့မခမ်းဘွယ်သောရဲစွမ်းသတ္တိတို့ ဖြင့်
Generation Z သူရဲကောင်းလူငယ်များအားလုံးကို
ရန်သူမျိုးငါးပါးတို့ ၏ ဘေးဆိုးရန်ဆိုး ကပ်ဆိုး အန္တာရယ်ဆိုးအမျိုးမျိုး မှကင်းဝေးကြပါစေ...
မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ အား ရက်စက်ယုတ်မာ
ခောတ်နောက်ပြန်ဆွဲ ဆင်းရဲတွင်း နက်သထက်နက်၍
ဘယ်လိုစကားလုံးနဲ့ မှနှိုင်းလို့ မရလောက်အောင်
ဆိုးရွားယုတ်မာလွန်းတဲ့ စစ်အာဏာရူး မကောင်းဆိုးရွားတွေကို
အပြီးတိုင် အောင်မြင်စွာတိုက်ထုတ်၍ တိုးတက် ကောင်းမွန်သော ငြိမ်းချမ်းသော
တိုင်းရင်းသားအားလုံးနဲ့ ဖွဲ့ စည်းတည်ဆောက်သော
ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ 
ငါတို့ ဘ၀နဲ့ ရေးခဲ့ကြတဲ့မော်ကွန်းတွေ
တော်လှန်ရေး ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတွင်းမှာရှေ့ ဆုံးက
ရဲရဲတောက် တို့ ပြည်သူတွေ
Never Give Up တို့ ညီအကိုတွေ
မတွေဝေနဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတွင်းမှာရှေ့ ဆုံးက
သြော်... သူရဲကောင်းတို့ လို ခိုင်မာပီပြင်တော်လှန်ပြစ်မလေ
တို့ ချစ်တဲ့ တို့ ဇာနည်တွေ
Posted by Dhamma Latsaung at Monday, April 19, 2021 No comments:
*~~~ကျွနုပ်၏တပိုင်းတစဒဿ နများ (၁၁)~~~*
အဲဒီရိုးသားမူ့ ဟာ ဘ၀ရဲ့လမ်းပြဖြစ်သလို
ရိုးသားမူ့ နဲ့ ရရှိတဲ့အရာမှန်သမျှ
အဲဒီသေးငယ်မူ့ ဟာ ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မူ့ ဖြစ်တယ်...။
ရိုးသားမူ့ မရှိတဲ့အောင်မြင်မူ့ ဟာ
မသမာမူ့ နဲ့ ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာ
တနပ်စားဥဏ်နဲ့တဘ၀စံတဲ့ လူတယောက်အတွက်
လူမှန်ရင်ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ 
ရိုးသားစွာ တောင်းစားတဲ့ လူတယောက်လောက်တောင်
လူ့ တန်ဘိုးမရှိ လူ့ အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့သူပါပဲ...။
ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်မှာ မသမာတဲ့နည်းနဲ့ 
ခိုးယူလိမ်လည်လို့ ရထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ 
မကောင်းမူ့ နဲ့ ရတဲ့ငွေဟာ အကုသိုလ်ထုပ်ဖြစ်နေလို့ ပါပဲ။
ဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်ရဲ့ သမာတဲ့နည်းနဲ့ 
ပင်ပမ်းစွာရှာဖွေလို့ ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ လှူတဲ့အလှူဟာ
ပိုက်ဆံချမ်းသာတိုင်း လူ့ အဆင့်အတန်းရှိပြီးလူရာဝင်တာမဟုတ်ဘူး
ငရဲ တရိစ္ဆာန် ပြိတ္တာ အသူရကယ်ဆိုတဲ့
မကောင်းမူ့ ကို မကောင်းမူ့ မှန်းသိလျှက်နဲ့ 
မကောင်းမူ့ လုပ်ရမှာကို မရှက်မကြောက်တတ်တဲ့သူဟာ
သူလုပ်ထားတဲ့မသမာမူ့ တွေ အကုသိုလ်တွေကို
ငရဲပြည်က Data ထဲမှာအကုန်သိမ်းထားတယ်
သူတပါးဆီက မရမက ဝေသာလီပြည်ဘီလူးကျသလို
သူ့ Data မှာရှိသလို ငရဲမှာလည်းသူ့ အကုသိုလ်တွေအကုန်ရှိတယ်...။
ခိုးဖို့လိမ်ဖို့ယုတ်မာဖို့ကောက်ကျစ်ဖို့စဉ်းလဲဖို့ 
အယောင်ဆောင်ဖို့ အတုအယောင်လုပ်ဖို့ 
ကုန်းတိုက်ဖို့ရန်တိုက်ဖို့ 
ပြဿ နာတွေဖန်တီးဖို့ 
အတို့ အထောင်လုပ်ဖို့ 
တို့ မီးရှို့ မီးလုပ်ဖို့ 
လောကကြီးကို အကုသိုလ်တွေဖြန့် ပြီး
Posted by Dhamma Latsaung at Sunday, September 08, 2019 No comments:
မေတ္တာ ကရုဏာ များစွာဖြင့်
ရေဘေးဒုက္ခရောက်နေသောမြို့ ရွာများသို့ အရောက်သွား၍
Posted by Dhamma Latsaung at Sunday, August 18, 2019 No comments:
အဲဒီတော့ တစ်ကယ်လွတ်လပ်မှုကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်
ဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးကိုမဆို ဖြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့ ပြုပါ၊
ဘာပဲလုပ်လုပ် ကုသိုလ်ရမှ လုပ်ပါ။
ဘာပဲပြောပြော ကုသိုလ်ရမှ ပြောပါ။
ဘာပဲတွေးတွေး ကုသိုလ်ရမှ တွေးပါ။
ဘာပဲဖတ်ဖတ် ကုသိုလ်ရမှ ဖတ်ပါ။
ကုသိုလ်လေးနဲ့ လှမ်းမှ တန်ပါမယ်
( BUDDHA) )
4.6. The Counting Method (part 3) ( ၄.၆ ရေတွက်နည်း - အပိုင်း ၃) - In order to know one’s own striving, the meditator should write down the times of counting breath in the record book in every session. ယောဂီသည် မိမိ၏ ကြို...